IZIGQIBO ZESIKHUMBA SENETFLIX: PHAMBI NASEMVA KOKUNGENISA INYANISO YELIZWE LOPHANDO LWEPLASTIKHI - IINKQUBO ZETV
Izigqibo zeSikhumba seNetflix: Phambi nasemva kokungenisa iNyaniso yeLizwe loPhando lweplastikhi
Ingcamango yonke yoPhando lwePlastiki iye yaxubusha kakhulu ixesha elide. Abanye abantu bayayonwabela, nalapho
Ingcamango yonke yoPhando lwePlastiki iye yaxubusha kakhulu ixesha elide. Abanye abantu bayayonwabela, kwaye kukho iimeko apho abantu baye baba likhoboka lotyando lweplastiki. Iintsomi ezininzi zijikeleze umbono wotyando lweplastiki. Uluntu lusajongile. Kodwa inyani iyafana nolunye uhlobo lwezonyango.
Zininzi iimuvi, kunye nothotho, apho utyando lweplastiki luye lwaboniswa njengeqhula. Nangona kunjalo, umboniso omtsha weNetflix, obizwa ngokuba yiSigqibo seSikhumba: Ngaphambi nangemva koko, ubonakalisa inyani yokwenyani yeplastikhi. Ngokungafaniyo nenye inyani ebonakalayo kutyando lweplastiki, lo mboniso awubhalisi abo bafuna ukuzisa utshintsho kwimizimba yabo ngokubandisa okanye ngokususa imibimbi. Endaweni yoko, ibonisa amabali abantu abafuna ukubuyela kwiziqobo zabo.
amarhamncwa amnandi imovie entsha
Akukho Mxholo ufumanekayo
Inyani yeNetflix bonisa isigqibo seSikhumba: Ngaphambi nasemva kokubonisa inyani yokwenziwa kotyando lweplastiki
Umboniso wenyani weNetflix, Isigqibo solusu: Phambi nasemva Ilandela umboniso ofanayo wolunye uthotho njengale Ungayinxibi. Umboniso owenziwe okokuqala ngoJulayi 15, 2020, kwiNetflix, ngeziqendu ezisibhozo zizonke. Olu luhlu luqala ngabantu ababini abafuna ukutshintsha inkangeleko yabo ngotyando lweplastiki. Emva koko singena kwibali labo malunga nokuba kutheni bafuna ukuphucula intetho yabo, ukungazithembi ngomzimba wabo, nokunye okuninzi.
Inkqubo ye- abathathi-nxaxheba bayahlangana iingcali ezimbini, enye kwiPlastic Surgeon, uSheila Nazarian, kwaye enye ingumongikazi kunye nengcali yokunyamekela ulusu, uJamie Sherill. UJamie udume ngomsebenzi wakhe nosaziwayo abanjengoKardashians.
Ngexesha leziqendu, izifundo kunye neengcali zithetha ngokulindeleyo kuqhaqho lweplastiki. Kwaye ukuphela kwayo, bagqiba kwelokuba ngubani umgqatswa ongcono kotyando, oluthi lwenziwe ziingcali njengoko kufuneka.
uthotho lokuqalisa isizini 4
Utyando lweplastikhi ludlulela ngaphaya kokungakhuseleki kwezithambiso kwiimvakalelo, imicimbi ebuhlungu
Ngokuchasene nombono oqhelekileyo wokuba utyando lweplastikhi kukwenza abantu bajongeke ngcono kwaye bangayamkeli imizimba yabo yendalo, iya ngaphaya koko. Lonke uthotho, Izigqibo zolusu: Ngaphambi nasemva kokubonisa ukuba utyando lweplastiki lungaphezulu kwesixhobo sokuthambisa.
Uninzi lwezifundo eziza kuthotho zinamava abuhlungu kubomi babo bokwenyani, obenze ukuba batshintshe inkangeleko yabo. Uninzi lwezifundo lwaludlulile ukonakala kunye nokonakala, kwaye ezinye zazingqina ngokwesini ngokunjalo.
Olu luhlu lubonisa ukuba utyando lweplastikhi lunokuba yindlela yokuphilisa yomntu kwizigulo ebezihamba nabo iminyaka.
U-Anne eneXesha le-E le-4 Yonke into ekufuneka uyazi malunga noMdlalo ozayo, iTrailer, kunye noHlaziyo lwamva nje omele uyazi
Ixesha leVikings 6- Ziza kubuya nini iiViking? Ngaba u-Igor waseKiev ubekhona ngenene?
I-Netflix 'Iqalekisiwe' Ikhuthazwe nguArthur Legend Ngabesetyhini abaQinisekayo abaXhasiweyo njengeNkokeli
I-DC Justice League 2, 3 Unxibelelwano, ukulibaziseka, iNtshukumo eNtsha, iTreyila, kunye noHlaziyo oluHlaziyiweyo ekufuneka uyazi
I-GTA 6 Ixesha lokugqibela? Amarhe malunga neziNdawo eziFihlakeleyo kwisiXeko soMdlalo kunye noHlaziyo lwamva nje
Ekugqibeleni uGigi Hadid wayikhupha ikati ebhegini, wagqibela ngokumbonisa umntwana wakhe kwi-IG Live-Session!
Ukuhlaziywa kweBorderlands 3 KWENZA AMANQAMBA okuthambisa, uHlaziyo olutsha kunye nokufumana iKhowudi eNtsha yeShift yeeNdawo eziNtathu zeGolide, i-Hotfix eNtsha ilapha kwiZiphumo eziThanjisiweyo kunye nokunye okuninzi!
I-DABABY Iya Kukhupha iRekhodi eNtsha noCamila Cabello
U-Angelina Jolie Ukuchitha ixesha elimnandi noNyana wakhe uPax njengoko bephuma befumana ixesha loMgangatho kubhubhane
Uyintoni uMhla wokuKhutshwa, uCando, isiQendu, iTreyila? kwaye Singayifanisa nokuQala?
Imali Heist 5 Ukubuya kuQinisekiswe nguPina, uFans uxhasa u-El Professor
I-Twitteratis iBash Demi Moore ye-SUCKY Bathroom Decor UKHETHO
Yintoni enokulindelwa ngabalandeli kuVukani?
youjo senki ixesha lesibini
ixesha lokuthanda ilizwe 3
nini ixesha elilandelayo lokulahleka esithubeni
Ixesha elitsha lejack ryan
Ngaba kuya kubakho isizini 4 ye-anne nge e
Ixesha le-orville cast 2